Archive du 20201014
Fahatsiarovana ny Profesora Zafy Tsy hita indray ny filoham-pirenena
Tsy tazana teny Ambohijatovo indray omaly ny filoham-pirenena Malagasy, Andry Rajoelina, nandritry ny fitokanana ny tsangambato fahatsiarovana ny profesora Zafy Albert, filoham-pirenena teo aloha, efa nodimandry.
Herisetra tany Nosy be Voatsidron’antsy teo am-pamaniana ny fitombenany
Nitrangana toe-javatra mampalahelo tany amin’ny distrikan’i Nosy Be ny alahady alina teo.
Tanin’ny CUA amidy Misy dosie tsy mazava, hoy i Clémence
Tsaroantsika mpanao gazety tsara fa niteny ny ben'ny tanana, Franck Michel Niaina Andriantsitohaina, fa ho averina amin'ny kaominin’Antananarivo renivohitra (CUA) avokoa ireo taniny rehetra namidy na nisy naka tamin’ny fomba tsy ara-dalana, hoy ny mpanolontsain’ny tananan’Antananarivo, Clémence Raharinirina omaly.
Fitetezam-paritra misesisesy Atao fitaovana politika ny fahoriam-bahoaka
Mirarakompana ny fitetezam-paritra ataon’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina, izay tena manao fihodinana an’i Madagasikara mihitsy.
Fifidianana loholona Tsy voahaja ny miralenta
Hatreto moa izany dia mbola tsikera mivoy mikasika ny fifidianana ho loholona kasaina tontosaina ny volana desambra izao ny hoe mandeha ila.
Rivellino Ravelomahazo “Tokony mitondra vahaolana ny mpanohitra”
Manan-jo feno mandeha maneho ny heviny ny mpanohitra amin’ny maha tany demokratika an’i Madagasikara, hoy ny mpamakafaka politika sy mpahay lalana, Rivellino Ravelomahazo, naneho ny fahitany ny fitetezam-paritry ny mpanohitra ankehitriny.
Ady tany eny Ambohimangakely Narodan’ny kaominina ilay vavahady
Mitohy hatrany ilay raharaha ady tany eny amin’ny Fokontany Andranovao, kaominina ambanivohitra Ambohimangakely.
Tatitry ny SAMIFIN 78 ireo trangana famotsiam-bola nohadihadiana
Anisan` ny misongadina amin` ireo raharaha nalefan` ny SAMIFIN teny amin` ny tendrom-pitsarana misahana ny ady amin` ny kolikoly (PAC) ny raharaham-barotra amin`ny fanfarana entana.
Toetr’andro Amin’ny faran’ny herinandro vao hisy orana
Tena mahazo vahana ny hafanana eto an-drenivohitra. Mahatratra hatrany amin’ny 39 °C ny maripana farany ambony indrindra raha 23 °C no farany ambany indraindray, raha araka ny fanadihadiana natao teo anivon’ny sampana mpamantatra ny toetr’andro.
Afera BNGRC Niaro tena mafy ny Jeneraly Elack
Misy ampahany marina ary misy ny tsy marina manoloana ilay ampamoaka mahakasika ny Tale Jeneralin’ny BNGR Jeneraly Elack Olivier Andriankaja momba ny karaman’ny mpiasa tsy voaloa.
Minisiteran’ny serasera Nanome valin-kafatra ho an’ny OJM
Ao anatin'ny fanohizana ny fampahafantarana ny lalàna momba ny serasera izay efa natomboka tany Mahajanga dia nitsidika ny birao na "desk"n'ny haino vaky jery ny Minisitra Lalatiana Andriatongarivo sy ireo mpiara-miasa aminy, omaly.
Gana dia “Fotsimaso” Iray amin’ny 100 voalohany ahiana ho ripaka
Any amin’ny distrikan’Antsohihy, faritra Sofia indray ny Filoha Andry Rajoelina. Voalaza fa fitsidihim-paritra tanterahiny ho fanamarihana ny faha-62 taonan’ny nahaterahan’ny Repoblikan’i Madagasikara io.
Antetezambaro Toamasina II Napetraka ny toerana lehibe famokarana zana-kazo
Mihena tsikelikely ny velaran'ny alan'Atsinanana noho ireo tsindry mahazo azy toy ny doro ala, fanapahana hazo sy ny fitrandrahana tsy maharitra ny harena voajanahary ao aminy.
Efa mandeha ny firenena, efa misy ny fotodrafitrasa tokanana, efa mizarazara zavatra,…
Taxibe nidiran’andro Nitsoaka polisy, avy eo nandona polisy
Nosakanan'ny mpitandro ny filaminana ny taxibe iray mpitatitra olona eny amin’iny ny faritra Ambohimangakely iny, omaly.
Tsongobory Toliara I Jiolahy 2 lavon’ny balan’ny polisy
Jiolahy miisa roa no lavon’ny balan’ny oolisy ny 11 hifoha 12 oktobra teo tokony
Fanendahana Telolahy indray no nalefa eny Antanimora
Lehilahy miisa telo no voasambotry ny polisy miasa ao amin’ny kaomisarian’ Isotry ny 11 oktobra teo teny akaikin’ny tetezan-dRamala .
Fitandroana ny filaminana Miofana ny polisy monisipaly any Toamasina
Nandray polisy monisipaly vaovao maromaro ny kaominina ambonivohitr’i Toamasina (CUT). Miatrika fiofanana ao anatin’ny iray volana izy ireo.
Distrikan’Arivonimamo Nisitraka moto 10 ny mpitandro filaminana
Marary ny depiote Rakotomanjato Rodin ny tsy fandriampahalemana sy ny asan-dahalo mahazo ny distrikan’ Arivonimamo.
Faritany Miaramila Voalohany Nandray ny faneva ny Kolonely Andriambao
Tontosa omaly 13 Oktobra 2020 ny fanolorana ny faneva ho an'ny Kolonely Andriambao Ramisa, komandy vaovaon'ny Faritany Miaramila Voalohany (RM1), teny amin'ny toby Rakotonirainy Alphonse,
Dr Fidy Bariniaina “Mbola ilaina ny fanaovana arovava orona”
Efa vitsy dia vitsy ny tarehimarika mikasika ny Covid 19 saingy mila mitandrina foana isika satria mila tsaroana hoe olona miisa 3 no voan’izy io teto Madagasikara tany am-boalohany, hoy ny dokotera mpitsabo, Fidy Bariniaina.
Tatitra momba ny Covid 19 Isaky ny sabotsy sisa vao hipoitra i Profesora
Fito volana aty aoriana, nambaran’ny Minisitry ny serasera sy ny kolontsaina Rtoa Lalatiana Rakotondrazafy omaly, fa tsy hisy intsony ny fampitana ny antontan'isa mahakasika ny fivoaran'Covid 19 eto Madagasikara isaky ny atoandro,
Coronavirus Sitrana ny 96,23% tamin’ny marary
Miisa 28 ny tranga vaovao tao anatin’ny 24 ora, azo tamin’ny fitiliana 485 manome taham-pahavoazana ankampobeny 5,75%. Miisa 02 ny teto